# 2 ★Eduze ne-MRT Donghu Station 1min walk, Nangang Imper Hall, 7min Santo Rail * Cozy 1Room - I-Airbnb
# 2 ★Eduze ne-MRT Donghu Station 1min walk, Nangang Imper Hall, 7min Santo Rail * Cozy 1Room
內湖區, 台北市, I-Taiwan
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Ling
U-Ling Ungumbungazi ovelele
Rmwagen Leli fulethi le-studio lilungele uhambo lwebhizinisi, kanye neholide.
-MRT Donghu Station uhamba nje imizuzu engu-1, futhi kulula ukuhambahamba emgwaqeni
-Ukuthula, Kalula, Ukuphepha
-nearby 7-11, i-supmarket, izindawo zokudlela
Ukuthula, ukuphepha okuhle, indlela yokuphila elula,
elula ezokuthutha, umbungazi onobungane, ukuxhumana okuvumelana nezimo
Siyakwamukela endaweni yethu. Siyaqiniseka ukuthi uzokhululeka futhi uzizwe sengathi usekhaya. Leli fulethi le-studio lilungele ibhizinisi, lihamba nabangane noma abagibeli bezimpahla. Lapha kulula kakhulu futhi kulula emgwaqeni, ngokuthula nokuphepha. Ngethemba ukuthi uyayithanda.
Siyakwamukela ekuvakasheni kwakho, sizibophezele ekunikezeni indawo ethokomele ezwakala njengekhaya, le ndlu ilungele ibhizinisi, umphakathi, kanye nabantu basekhaya. Ukuhlala lapha kusebenza kakhulu, ezokuthutha kulula futhi kuphephile futhi kuthule, ngithemba ukuthi uyakuthanda.
Kukhona ezinye izindlu ezitholakalayo ukubhukhwa:
Lapha sinamakamelo ongawabheka futhi ubhukhe:
https://www.airbnb.com.tw/rooms/55 Atlan14☆ Rmwagen☆ https://www.airbnb.com.tw/rooms/5568end☆}
-Ihholo Lase-Nangang -Isiteshi se-MRT Donghu nesiteshi sebhasi
wendawo -7-11 isitolo esilula
-24hrs supermarket -izindawo zokupaka
zomphakathi -indawo yemidlalo yaseshashalazini, umtapo wezincwadi, indawo yokuzivocavoca, indawo yokubhukuda, izindawo zokudlela njll.
Ungathola izindawo eziningi nge-MRT namabhasi e-Taipei.
- Nangangprice} Hall, Toho Express Station and Bus Station, Traditional Market, 7-11, 24-hour supermarket, Public Parking, Cinema, Library, Gym, Swimming pool, Swimming pool, Restaurant, etc.
- Izitimela namabhasi ase-Taipei alula kakhulu ukuya ezindaweni eziningi
Sizokunikeza izikhiye futhi senze ifulethi lethu likusebenzele lapho ufika, khona-ke ngeke sisakwazi ukuhlala uze uhambe. Sicela uxhumane nathi ngocingo noma ngama-app nganoma yisiphi isikhathi uma udinga noma yiluphi usizo mayelana nefulethi.
Lapho ufika, sizoqala ukukufaka endaweni ezungezile nezindawo zangaphakathi, bese sishiya ngemva kokuletha ukhiye. Uma kunezinkinga noma izingxenye ezidinga usizo ekusetshenzisweni, sicela uqiniseke ukuthi uthintana nathi nganoma yisiphi isikhathi ukuhlinzeka ngamasevisi afanele nokuthuthukiswa okusheshayo.
Sizokunikeza izikhiye futhi senze ifulethi lethu likusebenzele lapho ufika, khona-ke ngeke sisakwazi ukuhlala uze uhambe. Sicela uxhumane nathi ngocingo noma ngama-app nganoma yisi…
ULing Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- 內湖區 namaphethelo